Transform Zimbabwe Yoshushikana neNhengo dzeAlliance Dziri Kuda kuKwikwidza muMatunhu aro
Bato reTransform Zimbabwe rinoti semamwe mapato ari mumubatanidzwa weMDC Alliance, rinoshushikana kwazvo nekunyoresa kwakaita nhengo dzeMDC-T inotungamirirwa naVaNelson Chamisa kuti dzikwikwidze mumatunhu adzinoziva kuti akapiwa mamwe mapato ari mumubatanidzwa weMDC Alliance.
Mutungamiri weTransform Zimbabwe, VaJacob Ngarivhume vanoti nhengo dzeMDC-T dzinofanirwa kuremekedza chibvumirano chakaitwa nemapato ari mumubatanidzwa uyu paakagovana matunhu ekukwikwidza.
VaNgarivhume vanoti bato ravo rakanga rapiwa matunhu gumi memapfumbamwe ekuti rikwikwidze musarudzo, asi pashure bato reMDC-T yaVaChamisa rakazotora mamwe mashanu vakasara vave negumi nemana.
Pagumi nemana ipapo, VaNgarivhume vanoti nhengo dzeMDC-T dzakasvitsa mapepa adzo kuNomination Court mumatunhu manomwe, zvichireva kuti bato ravo rangosara nematunhu manomwe chete, sezvo mamwe manomwe aya ave nedzimwe nhengo dzemubatanidzwa dziri kukwikwidzawo.
Vanoti matunhu akanga apiwa bato ravo asi ave kukwikwidzwa zvakare nenhengo dzeMDC-T yaVaChamisa anosanganisira Bikita East, uko kwavari kukwikwidza ivo VaNgarivhume, Harare South, Hwedza North, neMazowe North.
Asi vanoti matambudziko aya anogadziriswa chete kana veMDC-T vakasvitsa mapepa avo kudare reNomination Court ava vakanoturura magwaro avo nguva inobvumidzwa nemutemo yemazuva manomwe kubva pagara Nomination Court isati yapera.
Mazuva manomwe aya anokwana nemusi weChina 21 Chivabvu.
VaNgarivhume vanoti havafungi kuti matambudziko aya achakanganisa mafambiro emubatanidzwa wavo murwendo rwavo rwekununura vana veZimbabwe kubva muhutongi hweZanu PF hwemakore makumi matatu nemasere.